Community & Society » အံ့ဖွယ်လေးချက် သူခိုးနှက် Shoplifting	10
စီးပွားပျက်ကပ် မဆိုင်ခင် လူခြောက်သိန်း အလစ်သုတ်မှုဖြင့် နှစ်စဉ် အဖမ်းခံရသော်လည်း ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် အဆိုပါ ပြစ်မှုပေါင်း တသန်းကျော်သွားသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျင် အချိန်ကာလတူအတွင်း အဖမ်းခံရသော ဆိုင်ဝန်ထမ်းနှုန်းမှာ လေးရာခိုင်နှုန်းမျှသာ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အပြင်လူခိုးသော ပစ္စည်းတန်ဖိုးမှာ ပျမ်းမျှ ၁၂၉ဒေါ်လာ ဖြစ်၍ အတွင်းလူကြံလျင် ဒေါ်လာ ၇၀၀ကျော်ဖိုးအထိ ဆုံးရှုံးတတ်ကြောင်းကိုတော့ သတိပြုရန်လိုသည်။ (ဂ) ပုလိပ်အီးပေါက် သူခိုးမကြောက်
In the three minutes it takes to read this column, 1,500 items worth roughly $200,000 will have been stolen from the shelves of U.S. retailers. Add that up and it works out to be about 25-thousand shoplifting incidents each hour, or more than 500-thousand each and every day.
“Before the great recession, you had about 600,000 people apprehended for shoplifting each year. Last year, it was overamillion.“ By comparison, Colas says, during that same period of time, the rate of employee apprehension rose just4percent. It’s important to note, Colas says, that the average value of merchandise stolen by individuals is currently $129, but over $700 when it’s an inside job.
မင်း ခန့် ကျော် says: ယူအက်မှာပြည်သူဘက်ကခိုးတာထင်ပေါ်တယ်။
မပြောရဲလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
TNA says: ချွေးမွလေး အလုပ်သစ်လုပ်ရင် ဟောဒီယောက်ခမွကိုခေါ်ပါအေ။ အတော်ကိုက်မယ်ထင့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 362
Paing Lay says: အနော်ယဲ အားကျမခံ ဖားရိုက် ရရင်ကောင်းမားးးးးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဒီဂလို …
kai says: ကိုရင်ရေးမှ..ပြောစရာလေးပေါ်လာလို့..
ခိုးတာ..တော်ချက်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: သဂျီးသိဖို့ အဲလို အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ အစောင့်ဆိုတာ ဆိုင်ရာနတ်၊ဘီလူးတွေ ပံ့ပိုးမှုလိုတယ်။ သူတို့မှာလည်း ကွန်ပြူ တာလိုပဲ လုပ်ပေးနိုင်စွမ်း အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ စက်မဟုတ်တော့ အသုံးကျတယ်ဆိုပြီး သိန်းသောင်းချီ ထုတ်ထားခိုင်းစားလို့မရဘူး။ လူများများသုံးလေ ရဖို့ပိုခက်လေ၊ ဒါမှမဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်ကျလေပဲ။ သဂျီးသာ သမီးတော် သံစဉ်ခိုင်လေးကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပါ၊ ကြောင်ဆိုတာ ငါးကြော်သော လူသော နားမလည်ဘူး၊ ကြိုက်လျင် ချီသွားမှာပဲ… ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ်…
Ma Ma says: စကားအတင်းစပ်..
အောက်ဆုံးစာကြောင်းမပါဘူးနော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဟိုတလောက ကွန်ပူတာဆိုင်မှာ မိသားစုလိုက်ခိုးသွားတာ ဦးကြောင်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေလားဟင်
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: . ပြောလို့ပြောတာ